Tranonkala malaza ho famindra ny data - Semalt Advice
Teknika ampiasaina amin'ny famokarana angona avy amin'ny tranonkala samihafa. Fitaovana fampidiran-tserasera amin'ny tranonkala amin'ny alàlan'ny Protocol Protocol Hypertext Transfer ary manaparitaka fampahalalana mahasoa araka ny torolalanao. Ny bots na web crawler dia ampiasaina amin'izany. Izy ireo dia manangona tahirin-kevitra voalohany ary mamonjy azy ao anaty tahiry fototra - pirelli winter cinturato test. Ny dingana manaraka dia ny fametahana fanazavana manan-danja ho an'ny mpampiasa, ary ny fampitahana ireo rakitra ao amin'ny endrika mampiavaka azy. Ny mpikaroka sy ny mpandraharaha dia mampiasa ny tranon-tsolika hanamboarana ny zavatra ilainy. Ny sasany amin'ireo tranonkala malaza indrindra manangona angon-drakitra dia voalaza etsy ambany:
1. Tranonkala fitsangatsanganana:
Niroborobo ny indostrian'ny fizahan-tany nandritra ny volana vitsivitsy, ary ankehitriny dia iray amin'ireo orinasa malaza sy mahasoa amin'ny harato izany. Afaka mamorona vavahadim-pidirana mora ianao ary manolotra sidina mora vidy eo an-toerana sy iraisam-pirenena, serivisy sy serivisy ho an'ny mpanjifanao. Na izany aza, tokony ho azonao antoka fa ny fifanarahana atolotra anao dia ny to-ny-marika. Ho an'ity tanjona ity, dia mety ilaina ny manaisotra ireo angona avy amin'ny vavahadin-tserasera malaza toy ny TripAdvisor sy Trivago. Nohanina imbetsaka ny angona an-tserasera, ary afaka mampivoatra mora foana ny tranonkalanao mifototra amin'ny angon-drakitrao.
2. Joba boards:
Biraom-pikarakarana asa no mahatonga antsika hahita toerana mety araka izay antenaintsika sy ny fanabeazana. Rehefa mandefa asa ny orinasa iray, ny mpilatsaka hofidiana dia manolotra ny fiverenany sy ny momba azy. Ity fepetra ity dia tanterahana mandra-pahitan'ilay orinasa voavolavola ny mpilatsaka hofidiana. Ny zavatra manan-danja indrindra izay tokony iantsoran'ny toeram-piasana dia ny habetsaky ny asa aseho. Noho izany, afaka mampiditra olona marobe ianao ary hampivelatra ny raharahanao. Ampiasao ny Kimono Labs na ny Import. Izany dia ny hanaisotra ireo angona avy amin'ny toeram-piasana samihafa ary hanangana sehatra iray izay ahitana ny fangataham-panampiana. Raha vantany vao voarafitra ny angona, tokony alao ao anaty fiara sarotra ianao. Ataovy azo antoka koa fa marina ny rakitra ary misy fampidiran-dàlana fohy amin'ny asa fitadiavana asa sy ny mpamatsy asa.
Zava-dehibe ny lahatsoratra famoahana vaovao raha te-hijery ny zava-misy ankehitriny. Inona no fomba tsara indrindra ahazoana ny angona? Azonao atao ny manamboatra tranokala iray na tsikera iray (mozika manokana. io) mba hanangonana vaovao mahasoa avy amin'ny vavahadim-baovao. CNN, BBC, ary ny fampahalalam-baovao hafa dia mety ho lasibatra amin'ny Import. io sy Kimono Labs. Raha vantany vao tafavoaka ny votoaty dia azonao atao ny mamoaka izany amin'ny tranonkalanao manokana ary manatsara ny lozisan'ny fikarohana. Ohatra, raha te-hahalala lahatsoratra momba an'i Donald Trump ianao dia hahita vaovao mahasoa ao amin'ny Google News. Iray amin'ireo tombontsoa lehibe indrindra amin'ny tranokalam-baovao mibaribary dia ny azonao atao amin'ny fitaovana rehetra ary tsy mila ny fahaiza-mandamina programa. Ho an'ny fanombohana dia fotoana iray ahafahana manatsara ny raharahany sy manangona antontam-baovao avo lenta.